Aịzaya 17 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe Chineke kpebiri ime Damaskọs (1-11)
Jehova ga-abara mba dị iche iche mba (12-14)
17 Ihe Chineke kpebiri ime Damaskọs:+ “Damaskọs agaghịzi abụ obodo. Ọ ga-abụzi ebe e bibiri ebibi.+ 2 Ndị niile bi n’obodo ndị dị n’Aroa+ ga-agbapụcha. Ebe ndị ahụ ka ìgwè anụ ga na-amakpuzi. E nweghịkwa onye ga-emenye ha ụjọ. 3 Obodo ndị a rụsiri ike agaghịzi adị n’Ifrem.+ Alaeze dị na Damaskọs agaghịkwa adị.+ Ndị Siria fọrọnụGa-adị ebube otú ndị Izrel dị.” Ọ bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru ihe a. 4 “N’oge ahụ, a ga-eme ka Jekọb ghara ịdịcha ebube. A ga-emekwa ka ọ taa ahụ́. 5 Ọ ga-adị ka mgbe onye na-ewe ihe ubi na-achịkọta ọka* kwụ ọtọ,Mgbe o jikwa aka ya na-ewekọta ụyọkọ ọka. Ọ ga-adịkwa ka mgbe mmadụ na-atụtụkọta ọka ndị a hapụrụ n’ubi dị na Ndagwurugwu Refeyim.+ 6 Naanị ihe ga-afọ bụ ihe ndị a hapụrụ n’ubi,Dị ka mgbe a kụtuchara mkpụrụ dị n’osisi oliv: Naanị mkpụrụ oliv abụọ ma ọ bụ atọ chara acha afọdụ n’alaka ya nke dị n’elu elu,Naanị mkpụrụ anọ ma ọ bụ ise afọdụ n’alaka ya ndị na-amị mkpụrụ.”+ Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru ihe a. 7 N’ụbọchị ahụ, mmadụ ga-atụkwasị Onye kere ya obi, na-atụkwa anya ka Onye Nsọ Izrel nyere ya aka. 8 Ọ gaghị atụkwasị ebe ịchụàjà o ji aka ya rụọ obi.+ Ọ gaghịkwa atụ anya ka ihe mkpịsị aka ya mere nyere ya aka, ma ogwe osisi arụsị* ma ihe ndị e ji adọsa insens. 9 N’oge ahụ, obodo ya ndị a rụsiri ike ga-adị ka ụlọ ndị a hapụrụ n’oké ọhịa.+ Ha ga-adịkwa ka alaka a hapụrụ n’ihi ndị Izrel. Ala ya agaghịzi na-eme nri. 10 N’ihi na o chefuola Chineke+ zọpụtara ya. O chetaghị Oké Nkume,+ bụ́ ebe ya a rụsiri ike. Ọ bụ ya mere o ji kụọ osisi mara mma n’ubi,Kụọkwa osisi ndị mba ọzọ* na ya. 11 N’ehihie, ọ gbara ubi ya ogige nke ọma. N’ụtụtụ, o mere ka mkpụrụ ọ kụrụ puo. Ma, o nweghị ihe a ga-eweta n’ubi ahụ mgbe ọ na-arịa ezigbo ọrịa nakwa mgbe ya na ihe mgbu na-enweghị ngwọta na-alụ.+ 12 Geenụ ntị! Ọtụtụ ndị na-agba aghara. Ha na-agba aghara ka ebe oké osimiri na-amali elu. Mba dị iche iche na-emekwa mkpọtụ. Ha na-eme mkpọtụ ka ebili mmiri. 13 Mba dị iche iche ga-eme mkpọtụ ka ebili mmiri. Chineke ga-abara ha mba, ha agbaga ebe dị anya. A ga-achụkwa ha ọsọ otú ifufe si ebupụ mkpo ọka dị n’ugwuNakwa otú oké ifufe si eme ka ahịhịa ogwu na-agba gburugburu. 14 Mgbe chi jiri, a ga-enwe ọdachi. Tupu chi abọọ, ndị iro agaghịzi adị. Ihe a ka a ga-eme ndị meriri anyịNakwa ndị na-ebukọrọ ihe anyị.
^ Ọka a nwere ike ịbụ ọka wit ma ọ bụ ọka bali.
^ Ma ọ bụ “Dowekwa chi ndị mba ọzọ.”